पुराना सामान बेच्न क्याफे यू - बजारमा नयाँ - साप्ताहिक
पुराना सामान बेच्नु छ ? यदि छ भने शनिबार ललितपुरको बखुण्डोलस्थित क्याफे एन्ड रेस्टुराँको क्याफे यूमा जान सक्नुहुन्छ । बिहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म चल्ने उक्त मेलाका लागि अग्रिम टेवल बुकिङ समेत गर्न सकिन्छ ।
यदि तपाईंसँग थोरै सामग्री छन् भने ३ सय रुपैयाँको टेवलमा सामान राख्न सक्नुहुन्छ भने ठूलो टेवलका लागि ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । क्याफे मेलामा पहिरन, घरायासी सामग्री आदि बेच्न सकिने बताइएको छ ।
इभेन्ट म्यानेज्मेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल गठन
ट्रेन्डी क्याफे एन्ड बार
एयरपोर्टमा सामान ल्याउन गरिएको कडाइ कस्तो लाग्यो ?
नारायण वाग्लेको कोरियाना कफी गफ
बसन्तको सिने इक्यूमेन्ट हाउस सञ्चालनमा फाल्गुन ९, २०७५
बजारमा नयाँ हुण्डाइ स्यान्ट्रो फाल्गुन ३, २०७५
चाडपर्व र होम अप्लाइन्सेज कार्तिक २०, २०७५
स्मार्टफोन किन्ने मौसम आश्विन २५, २०७५
मध्यम स्तरका बाइक तथा स्कुटर आश्विन २२, २०७५
सिटी सेन्टरमा नील डेविड आश्विन १४, २०७५